नेपालकै अति उत्कृष्ट त्रिभुवन नमुना मावि तथा मैलुङ क्याम्पसको कथा व्यथा माझ प्रअ सन्तोष श्रेष्ठको शुभकामना – EstudyPage
Ram Gautam Birthday , Land and Building , News and update , welcome by dignitaries , October 19th, 2020
दूःखमा कटोस वा शुखमा प्रत्येक मानिसले जीवन विताई रहेको छ । विगतमा जे जसरी जीवन बिताएपनि अहिले कोरोनाले जति मानिलााई आतंकित बनाएको छ संभवतः यसअघि कुनै घटनाले पनि त्रसाएको थिएन । यस्तो अवस्थामा पनि मानिसले आस्था छोड्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले जसले जुन तरिकाले मनाएप नि दशैं मनाउने कुरालाई कसैले परित्याग नगर्ने हुँदा, मुखैमा आएको दशैंपर्वले हामी सवैलाई कोरोना लगायत अन्य सवैप्रकारका रोगसंग लड्ने क्षमता देओस भन्ने शुभ कामना आम मानव जातिमा संप्रेषण गर्न चाहान्छु । हाम्रो गरिमामय कर्मस्थल विद्यालय, विद्यालय परिवार, सञ्चालक समिति, शिक्षकबर्ग सवैको तर्फबाट बडादशै, दिपावली र छठ सम्मको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
त्रिभूवन माध्यमिक विद्यालय तथा मेलुङ क्याम्पस दोलखा
कुनै देश कत्तिको सम्पन्न छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो देशका बालबालिका पठन पाठन गर्ने विद्यालय हेर्नू पर्छ । शिक्षा केवल कितावको रटाईमात्र होइन विद्यालय वरीपरिको सुन्दर र सफा बातावरण, सफा कक्षा कोठा आकार्षक र सुविधासम्पन्न फर्निचरको लेआउट पनि हो । यो सवै हेर्नु प¥यो भने दोलखाको त्रिभूवन मावि तथा मैलुङ क्याम्पसको भ्रमण गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँको सुन्दर मनोरम बातावरणमा अवस्थित यो विद्यालयका प्रत्येक भवन कोठा चोटा, फर्निचर ग्राउण्ड आदि सवै यस्तो सुन्दरछन् कि यो स्कुल मात्र हेर्न आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो लाग्ला जस्तो छ । विद्यालयको सरसफाईले भवनले मात्र विद्यार्थीको सिकाई उँचाईमा पुग्छ भन्न खोजिएको होइन तर सफा सार्वजनिक निकाय सफा भविश्यको एक आधार पक्कै हो । यो विद्यालय वाहिरबाट हेर्दा नै विद्यार्र्थीहरुलाई पढौं पढौ लाग्ने खालको छ । प्रकृति प्रविधि र मानव निर्मित भवन सवैको सुदृश्यमय संयोजन दर्शनीय छ ।
यो विद्यालयमा सकारातमक सोंचका धनी प्रअ संन्तोष श्रेष्ठले सम्पुर्ण अभिभावक, वडाअध्ययक्ष, गाउँपाकिाअध्यक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत अन्य सरोकारवालहरुको सहयोगमा विद्यालय लाई संरचनामा माञ होइन शैक्षिक गुणस्तर पनि मननीय छ यहाँ ।
२००७ साल चैत्र १७ गते स्थापित यो विद्यालय दोलखाकै दोश्रो पुरानो विद्यालय हो । यो विद्यालयको स्थापना शुरुमा मेलुङका शैक्षिक पिताको रुपमा परिचित स्व. ललितबहादुर कार्कीद्धारा गरिएको थियो । २०२५ सालदेखि एसएलसि दिन शुरु गरेदेखि आज एसइईको युगसम्म आपुग्दा २५०० बढीले ले प्रचलित फलामेढोका पार गरी सकेका छन् । यो विद्यालयमा २०५८ सालबाट कक्षा ११ र १२ को पढाई शुरुभएको थियो । त्यसैगरी २०६५ मा विद्यालय हताभित्र त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सम्वन्धन लिएर एक सामुदायिक क्याम्पस पनि संञ्चालन गरिएको छ । जहाँ बिएडको पढाई हुन्छ र गाऊँका दिदी बहिनी दाजुभाईले घरकै खर्चमा उच्च शिक्षार्जन गर्न पाएको अवस्था छ ।
यसैगरी २०७६ सालबाट विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवशायिक तालिम परिषद, सिटिइभिटीबाट संम्वन्धन लिएर ३ बर्षे सिविल इञ्जिनियरिंग तथा डिप्लोमा कार्यक्रम संञ्चालन भएको छ ।
यो विद्यालय २००७ साल देखि नै नेपाली सेनाको जग्गामा थियो । २०७२ सालमा भूकम्प जादा यो विद्यालयको भौतिक संरचनापनि क्षतविक्षत भयो । त्यस पछि विद्यालय पुननिर्माण गर्ने बेलामा सवै दाताले विद्यालयको नामको लालपुर्जा सहितको जग्गा चाहिने भयो । यस्तो अवस्थामा यो विद्यालयकै पुर्व विद्यार्थी तथा समाजसेवी रामहरी श्रेष्ठ द्धारा स्वर्गीय मातापिता नरमान र देवमायाको संझनामा विद्यालयलाई ३१ रोपनी जग्गा दान गरियो । यो महादानले गर्दा विद्यालय आफ्नो जग्गामा उभिन पायो ।
६०० बढी विद्यार्थीको अध्ययनास्थल यो विद्यालयमा अहिले एडिबीको सहयोगमा २४ कोठाको ठूलो भवन बनेपछि यो विद्यालय शिक्षा विभागबाट नमुना विद्यालयको रुपमा छानिएको छ । अव यहाँ ८ कोठे भवन, अडोटोरियम हल, छात्रबास र संग्राहलय पनि बन्दै गरेको छ । यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला मात्र होइन अंग्रजी, गणित, सामाजिक र नेपाली बिषयको अलग अलग ल्याव सहितका कक्षा कोठा बनाइएको छ । विद्यार्थीहरुको सार्वोपरी र सर्वाङ्गिण विकासका लागि. यहाँ भरमग्दुर प्रगति र प्रयास जारी छ ।
यो विद्यालयको गुणस्तर उत्थानका लागि विद्यालय परिवारका साथै विद्यालय व्यव्सथापन समिति लगायत अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर कार्की, बडा अध्यक्ष कुसुम लामा र गाउँपालिका अध्यक्ष नर बहादुर श्रेष्ठको निरन्तर साथ र सहयोग रहेको छ । यसैगरी अहिले अभिभावकहरु पनि अति नै चनाखो भएर विद्यालयलाई उदाहरणीय बनाउन लाग्नु भएको छ ।
एकपटक अलिकति नाजुक अवस्थामा पुगेको यो विद्यालयमा अहिले नयाँ शिक्षकहरुको टिमले काम गरीरहेको छ । २०७१ साल ४ महिना १ गते शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेर २०७२ साल पौषबाट प्रधानाध्यापक बनेका सन्तोष श्रेष्ठको नेतृत्वमा १ देखि ७ कक्षा सम्म अंग्रजी माध्यमबाट पढाइन्छ । विद्यार्थिलाई सिलाइबुनाई जस्ता जीवनउपयोगी शिक्षा पनि सिकाइन्छ र सानैबाट बच्चाले उद्यमशिलताको बारेमा पनि सिक्न पाएका छन् ।
जे होस यो विद्यालय फरक तरिकाले आधुनिक तरिकाले अगाडी बढेको छ ।
सानिमा ३ महिनामा ३७ घटेर ३७ मै ठहरियो